Fahad Yaasiin Daahir oo laga qaadey xilkii agaasimaha Madaxtooyada loona beddalay NISA • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Fahad Yaasiin Daahir oo laga qaadey xilkii agaasimaha Madaxtooyada loona beddalay NISA
Fahad Yaasiin Daahir oo laga qaadey xilkii agaasimaha Madaxtooyada loona beddalay NISA
August 16, 2018 - By: HORSEED STAFF
Fahad Xaaji yaasiin Daahir
Wareegto ka soo baxdey Madaxweynaha jamhuuriyadda Federaaliga ah Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo subaxnimada Khamiista soo gaartey saxaafadda ayaa lagu magacaabey Agaasimaha guud ee madaxtooyada, Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka iyo xilal kale.
Fahad Xaaji Yaasiin Daahir oo ahaa agaasimaha Madaxtooyada ayaa xilkaas laga qaadey waxaana loo bedalay ku-xigeenka hay’adda NISA, si lamid ah waxaa xilalki laga qaadey labadii agaasime ku-xigeen ee NISA oo horey shaqo joojin loogu sameeyey, waxaana hay’addu hadda leedahay hal ku-xigeen oo ah Fahad Xaaji yaasiin Daahir oo lagu xanto in uu xiriir dhaw la lee yahay dowladda Qatar.
Fahad Yaasiin ayaan shaqadiisu ku ekayn in u yahay Agaasime Madaxtooyo waxaana uu safaro joogto ah ugu bixi jirey dalalka Kenya, Sudan, Qatar, Turkiga iyo dalal kale.
Agaasimaha cusub ayaa loo magacaabey Dr. Aamnia Siciid Cali oo ahayd agaasime ku-xigeenka Madaxtooyada.
Gen. Daahir Indho-qarshe ayaa mar kale Madaxweynuhu u magacaabey in uu noqdo Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waana taliyhii saddexaad ee Madaxweyne Farmaajo magacaabo tan iyo sanadkii hore 2017, waxaana uu horey u magacaabey Gen Cirfiid iyo Gen. Gorod.
Madaxweynaha ayaa xilalkii ka qaadey labadii agaasime ku-xigeen ee NISA ee horey shaqo joojinta loogu sameeyey, sidoo kal waxa uu magacaabey Abaanduulaha ciidanka, ku-xigeenka taliyaha ciidanka Booliska iyo taliyaha ciidanka badda.